Ukubhukisha ipakethe endaweni yokuhlala kuqoqosho lokwabelana kuya kuba sisimo sika-2022
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Ukubhukisha ipakethe endaweni yokuhlala kuqoqosho lokwabelana kuya kuba sisimo sika-2022
Xa uqoqosho lokwabelana lwalusaqala, ababoneleli abafana no-Airbnb beza nembono entsha ngokuhlala, kugxininiswa kukuzimela nokuba ngumntu ngamnye. Kodwa iihotele zibambekile, zigxile kwimithetho engaphantsi, njengokungena kwangethuba, ukuphuma kade, kunye neendawo ezihlala abantu ezingenazinto zininzi.
Abakhenkethi beholide bonyaka ozayo banamathuba amane okukhetha ukhuseleko lweholide yephakheji kunokuba ukhethe ukhetho loqoqosho lokwabelana, lubonisa uphando olukhutshwe namhlanje ngoMvulo we-1 kaNovemba) yi-WTM yaseLondon.
Phantse isithathu (32%) sabo bacinga ngeholide yaphesheya ngo-2022 kusenokwenzeka ukuba babhukishe iphakheji yeholide, xa kuthelekiswa ne-8% abaza kubhukisha kwindawo yoqoqosho yokwabelana, efana ne-Airbnb, idiza iNgxelo yoShishino ye-WTM, ethe yavota. Abathengi be-1,000 base-UK.
Abakhenkethi abasuka kwiindawo ezithile zelizwe, kuquka iNorth Wales okanye uMntla Mpuma, bathi abanakubhukisha ukhetho lokwabelana ngezoqoqosho kwaphela, ngelixa abo baseMzantsi Ntshona (21%), eGreater London (14%) naseYorkshire naseHumber ( I-13%) ngabona bafanele ukubhukisha indawo yokuhlala efana no-Airbnb.
Ukwabelana ngokubhukishwa kwezoqoqosho kunyuke nge-73% phakathi kwe-2013 kunye ne-2014, kunye noqikelelo lwe-PwC lunokuthi lube ne-50% yendawo yokuhlala yeeholide ngo-2025. Nangona kunjalo, bekukho iinkxalabo kwishishini lokuhamba malunga nokwabelana ngolawulo lwezoqoqosho, kunye noSihlalo we-ABTA, uNoel. Josephides, owaphakamisa lo mbandela kwiminyaka eli-15 eyadlulayo.
Ukwabelana ngababoneleli ngendawo yokuhlala yoqoqosho baxele ukwanda kokubhukisha ekuqaleni kobhubhane njengoko abahambi beziphepha iihotele kumakhaya abantu. Kodwa abanye bathi ukwahluka kwe-COVID kubone ukubhukisha kuncipha mva nje, i-Airbnb ilindele ukuba kubhuke amanani abuthathaka kwaye isilumkiso sika-2021 siza kuhlala singaphantsi kwamanqanaba ka-2019.
Okwangoku, ukunqunyulwa rhoqo kunye nokutshintsha okubangelwa yinkqubo yokukhanya kwethrafikhi yoRhulumente wase-UK ibonise izibonelelo zokubhukisha iholide yephakheji ye-ATOL ekhuselweyo ngenkampani ehloniphekileyo, kunye nabaqhubi abaninzi kunye nee-arhente ezitshintsha imigaqo-nkqubo ukuvumela ukuguquguquka okungakumbi kwabo bahamba ngeeholide abafuna ukutshintsha. ukuya kwindawo eyahlukileyo okanye umhla.
Ukuchasana nokuhla - nokufumana inzuzo ngomsebenzi osuka naphi na, u-Airbnb uye wasungula inyathelo elithi 'Hlala naphi na kwa-Airbnb' ngoJuni, elibonelela ngokuhlala unyaka simahla, kubasebenzisi ababalisa ngamava abo. Iza njengoko umboneleli wendawo yokuhlala ethe ukuhlala kweentsuku ezingama-28 okanye ngaphezulu kwandiswe kwikota yokuqala ka-2021.
UMlawuli weMiboniso we-WTM eLondon uSimon Press uthe: “Ubhubhani we-COVID ngokungathandabuzekiyo ube nempembelelo kukhetho lwabantu malunga nokuba loluphi uhlobo lwendawo yokuhlala abaziva bekhululekile ukuyibhukisha, neenkampani zeeholide zephakheji zityhala izibonelelo zokhuseleko lwe-ATOL kunye nokubhukisha okubhetyebhetye, nangona kufanelekile ukutsho. izinto ezithandwa ngu-Airbnb nazo ngoku zibonelela bhetyebhetye ngakumbi, ukuba abantu batshintshe iingqondo zabo.
“Xa uqoqosho lokwabelana lwalusaqala, ababoneleli abafana no-Airbnb beza nembono entsha ngokuhlala, kugxininiswa kukuzimela nobuntu. Kodwa iihotele zibambekile, zigxile kwimithetho engaphantsi, njengokungena kwangethuba, ukuphuma kade, kunye neendawo ezihlala abantu ezingenazinto zininzi.
“Kwakhona, iindawo ezininzi apho iipropathi zoqoqosho ekwabelwana ngazo ziqhuba kakuhle zikwiindawo zabakhenkethi ezaziwa kakhulu apho kukho ukunqongophala kweehotele zemveli. Kodwa, ngenxa yokuba i-COVID ivale umhlaba kakhulu kwiinyanga ezili-18 ezidlulileyo, ayisiyongxaki okwangoku.
“Ekugqibeleni, emva kweenyanga zokuxelelwa ukuba sihlale ezindlini, uninzi lwethu ludiniwe kukuzimela, ngoko ke ingcinga yokubhukisha ihotele apho kukhethwa izitya ezitsha nezimnandi, eziphekwe ngomnye umntu, ngokuqinisekileyo ziyabhenela. abo kuthi bafuna omnye umntu abalinde iiveki ezimbalwa. ”